Mayelana NATHI - Haidari Beauty Technology Co., Ltd
Siyakwamukela Xhumana Nathi!
Ubuhle beHaidari ikakhulukazi buhlinzeka nge-CO2 laser fractional (ukwelashwa kwesitho sangasese sowesifazane kanye nesivalo, ukulungiswa kwesikhumba, ukuvuselelwa kwesikhumba), i-Picosecond laser, i-Erbium laser (1550nm, 2940nm), umshini wokunciphisa i-laser, umshini wokukhipha izinwele we-808nm, umshini wokumaka, njll.
Kusukela yasungulwa, le nkampani ibilandela imithetho emine "yekhwalithi yokuqala", "ikhasimende kuqala", "insizakalo kuqala" kanye "nedumela kuqala". Sibheke phambili ebukhoneni bakho nokubambisana, futhi wenze imizamo ngokuhlanganyela imbangela laser nge umkhakha kazwelonke China.
Le nkampani ineqembu lezinga eliphakeme elenzelwa elekhtronikhi, i-optical kanye nokunemba ngemishini yezobuchwepheshe kanye nabasebenzi bokuthuthuka, abanezinsimbi zokukala ezithuthukile zomhlaba wonke, ezokwenza ngcono inqubo yokukhiqiza esebenza kahle nohlelo oluqinile lokuphatha ikhwalithi, ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo yethu.
Le nkampani igxile ekukhiqizeni imishini yokusebenza ephezulu, amandla aqinile wezobuchwepheshe, amakhono okuthuthuka aqinile, izinsizakalo ezinhle zobuchwepheshe